Zavatra 8 tsy azon'ny mpitsabo mpanampy atao aminao (na olon-kafa) - Mpanararaotra
Ilay tokana sy tokana programa fanarenana fanararaotana narcissistic mila izany ianao.
Raha mbola tsy nisy karazana fifandraisana tamina mpihinana zava-mahadomelina na oviana na oviana ianao - ataovy am-pitiavana izany na satria manana iray amin'ny maha-mpianakavy ianao - dia mihevera tena fa sambatra ianao.
Ny narcissism dia iray amin'ireo toetra mampisy poizina indrindra azon'ny olona iray, ary afaka manimba olona marobe manodidina azy. Ny fiainany dia mihodinkodina amin'ny filany sy izay ilainy manokana, ny halehiben'ny fitiavan'ny olon-kafa azy ireo, ary ny fomba tsara hanodinana ny olon-kafa hanaraka ny fombany.
Ireto ambany ireto misy ohatra vitsivitsy momba ireo karazana zavatra tsy vitan'ny mpampihorohoro na iza na iza, mainka fa olona lazain'izy ireo fa miahy azy ireo.
1. Omeo Sh * t momba ny zavatra tsapanao
Narcissists dia handratra sy hanimba ireo akaiky azy kokoa noho ny tsy ho tsapany akory, ary ny ampahany ratsy indrindra dia ny tsy fanomezana sh * t.
Tsy afaka izy ireo.
Tsy mahay manome masira f * ck tokana momba ny karazana fanaintainana ataon'izy ireo amin'ny olon-tiana izy ireo, ary raha tsy hoe mandray andraikitra hanalavitra ny tenany ny olona akaiky azy ireo, dia hitohy ny fanararaotana sy ny fanaintainana. mandrakizay.
wwe seth rollins vs dean ambrose
Ireo izay misafidy ny hijanona dia mety ho lasa zatra amin'ilay hevitra ihany koa fa tsy avela maneho ny fihetseham-pony manokana izy ireo. Tsy maintsy mandeha an-tongotra amin'ny atody izy ireo mba hahasambatra ilay mpifoka rongony, ary amin'izany dia aza avela hanafika azy ireo.
ahoana no ahazoam-bola mrbeast
Rehefa dinihina tokoa, raha milaza ianao fa mandratra anao izy ireo, dia hitodika izy ireo ary hahatonga anao hahatsapa ho olon-dratsy noho ny nampahasosotra azy ireo tamin'ny filazany izany.
2. Liana amin'ny olanao
Matotra tokoa izy ireo. Ny filazana azy ireo momba ireo zavatra manelingelina anao na mandratra anao amin'ny fiainanao manokana dia ho voahilikilika na tsy ho jerena, ary avy hatrany dia hamoaka diatribe momba ireo zava-dratsy rehetra atrehin'izy ireo izy ireo.
Ny olanao dia mahasorena .
Raha tsy mahatafiditra azy ireo na mihodina manodidina azy ny lohahevitra dia maninona ianao no miteny? Tsy olona azonao aleha amin'ny fampiononana na fanomezan-toky momba ny zavatra rehetra io. Misedra olana ara-pahasalamana ve ianao? OMG, ny ratra kely ataon'izy ireo dia tena maharary ary ratsy lavitra noho izay rehetra atrehinao. Fisarahana ratsy? Notantarain'izy ireo taminao ve ny daty mahatsiravina nananany tamin'ny herinandro lasa?
Momba azy ireo ny zava-drehetra, amin'ny fotoana rehetra, koa raha hifanerasera amin'izy ireo mihitsy ianao, dia mety ho zatra an'io ihany ary milalao.
Raha zoronao ny mpampihomehy iray ary terena izy ireo hanaiky fa nanao zavatra mahavariana taminao izy ireo dia aza manantena azy ireo hiala tsiny. Ny fahatsapan'izy ireo voalohany dia ny hanazava anao - andramo hampino anao fa adala ianao, na mahatadidy zavatra tsy nety - mba hialan'izy ireo amin'ny tsiny rehetra. Raha ny azy ireo fandrehitra tsy mandeha, handeha hiaro izy ireo ary hiezaka hamily ny resaka amin'ny zavatra tsy nety nataonao.
Raha misy fahagagana tanteraka azonao atao ny miala tsiny, dia ho antsasaky ny assed, bitchy, ary tsy tso-po izany. Saintsaino manaraka ireto andalana:
'Mialatsiny aho, okay? Mangina ve ianao izao? ”
'Azafady fa saro-pady ianao ary tsy nety tamin'ny fomba rehetra.'
Tadidio fa tsy nanao ratsy mihitsy izy ireo. Lavorary sy mahafinaritra izy ireo ary raha manana olana amin'ny zavatra efa vitany ianao, dia eo aminao daholo izany.
4. Ataovy izay hahatsapanao tsara ny tenanao
Ireo narcissist dia mazàna manandrana mampamirapiratra ny tenany amin'ny fametrahana ny hafa ambany, indrindra amin'ny toerana ampahibemaso. Matetika izy ireo no minamana amin'ireo izay heverin'izy ireo fa tsy manintona kokoa noho izy ireo ka izy ireo no ivon'ny fiheverana na aiza na aiza alehany, ary hanao snide izy ireo, mahery setra fanamarihana amin'ireo lazaina fa sakaizan'izy ireo. Io fanamavoana io dia mahatonga azy ireo hahatsapa ho matanjaka, satria misy zavatra vitsivitsy tsy tian'ny mpitsikilo mihoatra noho ny hoe aiza na aiza fa eo an-tampon'ny piramida.
Mandritra ny fisakafoanana iray dia mety maneho hevitra momba ny safidin'ny sakafon'ny mpiara-miasa iray ny narcissist iray, manontany raha tena mila kaloria be tokoa izy ireo, raha jerena ny fitafiany. Na, rehefa voahodidin'ny vondrona iray, dia mety haka zavatra an'ny iray amin'ireo 'sakaizany' izy ireo ary hampahafantatra azy ireo fa mindrana izany izy ireo, amin'ny fahafantarana fa hahatsapa ho tsy mahazo aina ilay olona manohitra azy nefa tsy toa adala. Raha tezitra ilay olona dia hampiodina ny masony ilay mpitsabo ary hiampanga azy ireo ho saro-pady loatra. A vazivazy , inona tsara hoe.
Fitiavana baomba: famantarana fampitandremana mialoha fa mampiaraka amin'ny mpivady rongony ianao
5. Ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra ataon'izy ireo manokana
… Satria tsy misy diso azy ireo mandrakizay. Tadidinao?
Izay toe-javatra rehetra idiran'izy ireo izay mety mankany amin'ny afobe dia voatifitra noho ny asa ratsy nataon'ny hafa - fa tsy azy ireo. Ireo fifandraisana taloha izay tsy nahomby tamin'ny fomba ratsy? Eny, izany dia satria nampiaraka tamin'ny olona mahatsiravina izay tsy tena tia na nankasitraka azy ireo izy ireo. Nisy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny? Izany dia satria ny mpiara-miasa aminy dia imbecile tsy mahay. Adinon'izy ireo ny nanatrika fivorian'ny ray aman-dreny / mpampianatra manan-danja? Eny, tokony ho nampahatsiahy azy ireo ianao: tsy afaka manantena azy ireo hahatadidy ny zava-drehetra ianao, sa tsy izany?
Ny narcissists dia tsy afaka, tsy handray andraikitra amin'ny asa ratsy rehetra, satria ao an-tsainy dia tsy manao ratsy izy ireo. Izy ireo no olona idealy, mpiasa tonga lafatra, mpiara-miasa / vady tonga lafatra, ka raha misy ratsy eo amin'ny fiainany dia hadisoana ara-bakiteny ny olon-drehetra ankoatran'ny azy manokana.
6. Tohano ianao ara-pientanam-po
Ny fanaovana ny hafa hahatsapa ho toy ny sh * t momba ny tenany no ataon'ny mpitsabo tena tsara indrindra, koa aza manantena azy ireo hanolotra karazana fanohanana ara-pihetseham-po rehefa mila izany ianao. Raha ny mpifankatia no mpiara-mitory aminao, tandremo fa ny mifehy ny olon-kafa ary mahatonga azy ireo hahatsapa ho tsy manan-kery sy tsy afa-manoatra dia toetra iraisan'ny mpamitaka toy izany.
Avy eo, raha vantany vao tonga ilay zavaboary tsy manan-kery sy tsy manan-kery noforonin'izy ireo ianao dia hataon'izy ireo tsinontsinona noho ianao marefo sy mila fanampiana.
zavatra sasany tokony hatao rehefa mankaleo anao
7. Ankafizo ny zavatra ataonao ho azy ireo
Raha mifandray am-pitiavana amin'ny mpifoka rongony ianao (fanahy be herim-po, diso lalana) ary mikasa ny hitondra azy ireo hisakafo hariva, asiana voninkazo eo ambony latabatra, ary haka divay mahafinaritra, sns., Miomàna ho simba. Raha tokony haneho refy fankasitrahana izy ireo dia hitaraina izy ireo fa aleon'izy ireo misafidy trano fisakafoanana hafa, ny voninkazo tsy ankafizin'izy ireo, ary tokony ho Pinot Noir no nibaiko fa tsy Malbec. Misento.
Ny fihetsem-po sy ny eritreritra ao ambadiky ny fihetsikao dia tsy misy dikany fa tena tsy miraharaha izay zavatra tadiaviny sy ilainy fotsiny izy ireo, ary mety ho diso daholo na inona na inona ataonao. Raha misavoana zavatra nomenao azy ireo izy ireo rehefa tsy tena tian'izy ireo izany, dia azonao atao ny milaza fa miharihary izany, ary azonao antoka fa hangataka zavatra hafa tadiaviny ianao ao anatin'ny adiny 3 eo ho eo.
8. Tiavo ianao
Tsy dia izany loatra. Afaka mahatsapa zavatra sasany izy ireo, saingy ny fitiavany anao dia hiodin-kavoana amin'ny zavatra azonao atao ho azy ireo, ary ny fomba ianareo manao azy ireo mahatsapa. Raha mitondra tena toy ny hoe tia anao izy ireo, dia ho tombontsoan'ny olon-kafa izany ka ho talanjona sy ho talanjona amin'ny tsy fitiavan-tena sy fanoloran-tena ho an'ny vadinao izy ireo. Raha vantany vao lasa ny mpihaino azy dia hanjavona koa ny fifantohany sy ny fitiavany, ary hiverina ho olona maharikoriko sy feno fitiavan-tena ao ambadiky ny varavarana mihidy izy ireo.
Ny fiarahana amin'ny fiaraha-miasa am-pitiavana amin'ny mpifoka rongony dia mety hiteraka fahasimbana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina tsy mampino, noho izany raha mahatsikaritra ny iray amin'ireo toetra ireo amin'ny olona mampiaraka ianao, dia fantaro tsara fa mitety rano mampidi-doza ianao ary mandray fepetra hiarovanao tena.
Raha, kosa, mifandraika amin'ny mpampinono ianao dia mitadiava mpitsabo tsara afaka manampy anao hiatrika ny fahatezerana, ny fahasosorana ary ny lolom-po izay tsy maintsy ihodivirana amin'ny fifandraisan'ny mpianakavy amin'ity karazana mpanararaotra ity. Miaraka amin'ny mpampinono, hanao izany ianao aza mandresy ady hevitra mihitsy , avelao izy ireo hahatakatra ny fomba fijerinao, na hanana karazana fifandraisana salama na inona na inona, ary izany dia mety handrava indrindra raha toa ka nilaza ny ray aman-dreny fa mpitaiza anao. Mangataka fanampiana, ary mahereza hatrany.
Zahao ity Mazava ho azy amin'ny Internet natao hanampiana olona manasitrana amin'ny fanararaotana rongony .
Misy amin'ireto lakolosy maneno ireto? Mametraha hevitra etsy ambany mba hizaranao ny zavatra niainanao momba ireo teboka ato amin'ity lahatsoratra ity.
zavatra hatao mba tsy ho leo
ahoana no tsy hijanonako ho clingy
firy taona ny zanakalahin'i smith
tononkalo fohy mampieritreritra anao
zavatra hatao rehefa leo irery
ny fomba hifehezana ny maha empath